Family Disobedience Movement
စစ်အာဏာရှင်အမိန့်ကို မိသားစုအတွင်း မနာခံဘဲ တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှု
လူထုအခြေပြုမနာခံရေးလှုပ်ရှားမှုဟာ အာဏာရှင်စစ်သိမ်းအုပ်စုကထုတ်တဲ့ ဥပဒေနဲ့ အမိန့်တွေကို မနာခံပါဘူးဆိုတဲ့ နိုင်ငံသားတစ်ဦးရဲ့ တက်ကြွမှုရှိပြီး ပြတ်သားခိုင်မာသလောက် ကျယ်လောင်လှတဲ့ ငြင်းပယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်အမိန့်ကို မိသားစုအတွင်း မနာခံဘဲ တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှု (FDM) ဟာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုမှာ ပါဝင်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ မိမိအိမ်သားမိသားစုဝင်တစ်ဦးကို ချစ်ခင်လေးစားမှုကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ကျန်တဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ တက်ကြွမှုရှိပြီး ပြတ်သားခိုင်မာသလောက် ကျယ်လောင်လှတဲ့ ငြင်းပယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Civil disobedience is the active, professed refusal ofacitizen to obey certain laws, demands, orders or commands of the coup leaders.
Family disobedience is the active, professed refusal ofafamily member to respect another family member who is involved in the military coup.
အမေတို့ရေ – Mother
အမေတို့ရေ … အမေတို့ရဲ့သားစစ်သားတွေကို သူတို့လုပ်ရပ်အတွက် တာဝန်ယူခိုင်းပေးပါ။ အမေတို့အပေါ်မှာ မြန်မာပြည်လူထုဟာ မှီတည်ပါတယ်။ သူတို့ကို လူစိတ်ဝင်ပြောင်းလဲလာစေဖို့ ကျေးဇူးပြုပြီး အမေတို့တတ်နိုင်တာမှန်သမျှ လုပ်ဆောင်ကြပါ။
“Do not call me mum after killing other mum’s children without any empathy!”
ဇနီး – Wife
ဇနီးများ … သင်တို့ ခင်ပွန်းစစ်သားတွေကို သူတို့လုပ်ရပ်အတွက် တာဝန်ယူခိုင်းပေးပါ။ သင်တို့အပေါ်မှာ မြန်မာပြည်လူထုဟာ မှီတည်ပါတယ်။ သူတို့ကို လူစိတ်ဝင်ပြောင်းလဲလာစေဖို့ ကျေးဇူးပြုပြီး ဇနီးတွေ တတ်နိုင်တာမှန်သမျှ လုပ်ဆောင်ကြပါ။
“There is no love from me, your wife, at home for you who was violent and killed unarmed civilians.”
စစ်အာဏာရှင်အမိန့်ကို မိသားစုအတွင်း မနာခံဘဲ တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှု (FDM) က အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကနေ တစ်ကိုယ်ရည်မိသားစုဘဝထဲက တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်နဲ့ လူထုအခြေပြုမနာခံရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးဆီသို့ ချိတ်ဆက်ချဲ့ထွင်သွားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
The Family Disobedience Movement extends Myanmar’s Civil Disobedience Movement from the public space and into the private space.
How to join FDM
မိသားစုဝင်တွေက မိမိတို့မိသားစုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဦးဆောင်နေတဲ့ (ဒါမှမဟုတ်) ကူညီပေးနေတဲ့ ဘယ်မိသားစုဝင်ကိုမဆို ရေရှည်နဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ တိုက်ရိုက်ဖိအားမျိုးပေးခြင်းအားဖြင့် FDM ကို ဆောင်ရွက်ကြရပါမယ်။
တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ မိသားစုဝင်က CDM မလုပ်တဲ့ စစ်သား၊ ရဲ၊ ဒါမှမဟုတ် အစိုးရအရာရှိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် သူတို့ CDM မှာ ပါဝင်လာတဲ့အထိ သင်က FDM လုပ်ပေးဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းမှုထဲမှာ ပါဝင်ပတ်သတ်နေတဲ့ မိသားစုဝင်ကို ဆက်လက်လေးစားသမှုပြုပြီး ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကျန်မိသားစုဝင်အားလုံးဟာ ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ခါးဆည်းခံစားနေရတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုင်းကို တဖက်တလမ်းကနေ ပါဝင်ကူညီနေသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းက အဲဒီလူတွေကို တာဝန်ယူခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
Family members must do FDM by putting direct, sustained, and effective pressure on any family member who leads or assists the coup.
If your family member isasoldier, police, or official who is not doing CDM, then YOU havearesponsibility to do FDM until they join CDM.
All family members who respect, support, or help another family member involved in the coup in any way, is contributing to the violence against protesters. Society will hold them responsible.
သားသမီးများ၊ – Children
သားသမီးများ၊ … အဓမ္မဘက်မှာ သစ္စာခံနေဆဲ သင်တို့ ဖခင်တွေကို သူတို့လုပ်ရပ်အတွက် တာဝန်ယူခိုင်းပေးပါ။ သင်တို့အပေါ်မှာ မြန်မာပြည်လူထုဟာ မှီတည်ပါတယ်။ သူတို့ကို လူစိတ်ဝင်ပြောင်းလဲလာစေဖို့ ကျေးဇူးပြုပြီး သားသမီးနေရာက တတ်နိုင်တာမှန်သမျှ လုပ်ဆောင်ကြပါ။
“I cannot call you ‘father’ if you support the coup or are violent and killed unarmed people.”
ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကို – Siblings
အဓမ္မဘက်မှာ သစ္စာခံနေဆဲ သင်တို့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကို သူတို့လုပ်ရပ်အတွက် တာဝန်ယူခိုင်းပေးပါ။ သင်တို့အပေါ်မှာ မြန်မာပြည်လူထုဟာ မှီတည်ပါတယ်။ သူတို့ကို လူစိတ်ဝင်ပြောင်းလဲလာစေဖို့ ကျေးဇူးပြုပြီး ညီအစ်ကိုမောင်နှမနေရာက တတ်နိုင်တာမှန်သမျှ လုပ်ဆောင်ကြပါ။
“I will not speak if you support the coup or are violent and killed unarmed people.”
ချစ်သူ – Girlfriend
အဓမ္မဘက်မှာ သစ္စာခံနေဆဲ သင်တို့ ချစ်သူတွေကို သူတို့လုပ်ရပ်အတွက် တာဝန်ယူခိုင်းပေးပါ။ သင်တို့အပေါ်မှာ မြန်မာပြည်လူထုဟာ မှီတည်ပါတယ်။ သူတို့ကို လူစိတ်ဝင်ပြောင်းလဲလာစေဖို့ ကျေးဇူးပြုပြီး ချစ်သူတစ်ဦးနေရာက တတ်နိုင်တာမှန်သမျှ လုပ်ဆောင်ကြပါ။
“I will break up with you if you support the coup or are violent and kill unarmed people.”
FDM ကမ်ပိန်းမှာ ခေါင်းဆောင်နဲ့ ငွေကြေးမရှိသလို၊ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို အဆုံးသတ်စေပြီး ဒီမိုကရေစီကို ပြန်လည်ရယူထိန်းသိမ်းလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလွဲရင် တခြားဘာနိုင်ငံရေးအကြံအစည်မှ မရှိပါ။
FDM has no leaders, no money, and no political agenda except to end the coup and restore democracy.
© 2022	Family Disobedience Movement